လျှာအရသာအသစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ထမင်းသုပ်လေး လုပ်စားကြရအောင် – FoodiesNavi
လျှာအရသာအသစ်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ထမင်းသုပ်လေး လုပ်စားကြရအောင်
By yin sandi On March 20, 2018 0
တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထမင်းဖြူနဲ့ဟင်းတွေချည်းစားနေရလို့ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား?? အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်သွားအောင် အလွယ်တကူရှိနေတဲ့ ထမင်းတွေကိုသုပ်စားကြရမကောင်းဘူးလား ?? တခါတလေမှာ မထင်မှတ်ပဲလုပ်စားဖြစ်တဲ့ အစားအစာတွေက ခံတွင်းပိုတွေ့တတ်ပါတယ်။ ထမင်းသုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလည်း နေ့စဉ်မီးဖိုချောင်မှာ အသုံးပြုနေကျ အသင့်ရှိပြီးပစ္စည်းတွေဖြစ်တာကြောင့် အထွေအထူးအလုပ်မရှုပ်စေပါဘူးနော်။
ထမင်းသုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ထမင်းပူဆိုရင်တော့ စီးစီးကြီးဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက် ထမင်းကိုအအေးခံထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုပါးပါးလှီးပြီး ဆနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ထားတဲ့ ပဲဆီပူပူထဲကိုထည့်ကာ ဆီချက်ပြုလုပ်ပါ။ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်နီတွေကို ခပ်ပါးပါးလှီးထားပြီး မန်ကျည်းရည်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ထားပါ။
ထမင်းအေးသွားပြီဆိုရင်တော့ နယ်လို့အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ဇလုံတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ငပိစိမ်းစား ၊ လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ပဲအကျက်မှုန့် ၊ ငံပြာရည် ၊ ကြက်သားမှုန့် ၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် ၊ မန်ကျည်းရည်တို့ကိုထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပါ။ အပေါ့အငံကိုတော့ လိုသလိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်နော်။
အရသာအစပ်အဟပ်တည့်တဲ့ ထမင်းသုပ်လေးရသွားပေမယ့် အရံလေးတွေလည်း ထပ်ထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် သခွားသီးချဉ် ၊ ကြက်ဥကြော် ၊ ကြက်အူချောင်းကြော်တွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကိုပြီးပြည့်စုံသွားမှာ အသေအချာပါပဲ။ သခွားချဉ်ကိုတော့ သခွားသီးကိုပါးပါးလေးလှီးပြီး ကြက်သွန်နီ ၊ ရှာလကာရည်တွေကိုရောနယ်ပြီး ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်။
In Recipe Leaveacomment
ခံတွင်းလိုက်ပြီး ထမင်းမြိန်သွားစေမယ့် ချဉ်ပေါင်တို့ဟူးထမင်းသုပ် လုပ်စားကြည့်ရအောင်
လှအဉ္ဇလီတင့်ရောင်းတဲ့ (၆၀၀၀)ကျပ်တန် ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်ကို အိမ်မှာလုပ်စားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
ထမင်းလိပ်ကို အလှမစားဘဲ အဝစားနိုင်စေဖို့ အိမ်မှာပဲလုပ်စားကြရအောင်
ရာသီပေါ်ဓာတ်စာဖျော်ရည်လေးတွေသောက်သုံးပြီး ပူလောင်အိုက်စက်မှုဒဏ်ကနေ ရုန်းထွက်ကြမယ်…..